MaKristu Oenderera Mberi Nekucherechedza Zuva reEaster
Makristu akawanda munyika ainge achipembererera zuva reEaster neMuvhuro rinova zuva rekupedzisira rekurangairira kufa nekumuka kwaJesu.
Zuva reMuvhuro pazororo reEaster kana kuti Easter Monday rinocherechedzwa zvakasiyana siyana munyika dzepasi rino.
Vamwe vanenge vaine kusuwa kuti Jesu akaurayiwa asi vamwe vanenge vachifara kuti mwanakomana waMwari akafira zvitadzo zvevanhu akamuka. Vamwe ndivo vanenge vachifara havo nehama neshamwari.
Chipangamazano munyaya dzezvemagariro evanhu uye vari mufundisi, VaVukani Dhladhla vekereke yeGlobal Hope Ministries vanoti hurumende inofanira kuwanisa mikana kuvafundisi kuti vakwanise kutaura nevanhu munyika kuti muve nerunyararo nekunzwisisana munyika yeZimbabwe yakatarisana nedambudziko rezvehupfumi uho hwaenda kumawere.
Mufundisi Dhladla vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vanhu vapihwe dzidziso munyaya dzehupenyu yakakosha zvikuru.
“Vana mufundisi, nevamwe vanoziva nezvemagariro evanhu vanofanira kupihwa mikana vachibudawo mudzinhepfenyuro nemumapepenhau vachitaurawo nevanhu nezvemagariro avo. Izvi zvinobatsira nekuunza kuyanana munyika.”
Kunyangwe vakawanda vari kupemberera havo Easter, mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti vanhu vapfumbamwe vakafa munjodzi dzemumigagwa pazororo iri uye vamwe makumi mana nevatatu vakakuvara pazororo iri. Vanhu gumi vakafa panguva imwe chete gore rapera.
Hurukuro naMufundisi Vukani Dhladla